Faallo: Ma La Joogaa Xilligii Dib loo Eegi Lahaa Maammulka Maaliyadda Dowliga ah Puntland? - Horseed Media
Waxaan daawanayeysuaalo dhawr ah oo la xiriira miisaaniyadda Dowladda, si gaar ah kharashaadka dowladda kuwaas oo Baarlamaanka cusub ee Puntland, 2019, ay ku weydiiyeen Wasiirka Maaliyadda Puntland. Weydiimaha Baarlamaanka oo ahaa kuwa aad u xasaasi ah, ayaa ugu dambeyn wasiirku ku cududaartay inuusan xog badan ka hayn habka miisaaniyaddu u dagsantahay iyo qoondeynteeda ba, sidaa awgeed uu codsanayo in baarlamaanku sannadkaan ay u ansixiyaan habka ay tahay, wixii sannadkaan ka dambeeyana lagula xisaabtamo, sidaas ayeyna baarlamaanku ku ansxiyeen Miisaaniyadda Dowladda ee 2019.
Xogtaan aan taxliiliyey waxay ku salaysantahay Miisaaniyadda ay meelmariyeen baarlaamaankuoo ahayd sagaal bilood (Apr—Dec, 2019), maadaama 3dii bilood ee hore lagu shaqeynayey miisaaniyad ku meelgaar ah, dhammaan xogta aan warbixinta ku xusayna iyada ayaan kasoo xigtay.
Hadda ba waa kuwaan afarta qodob aan isdul taagay, kuwaas oo ah qofkasta oo akhriya uu suaalo iska weydiin doono hannaanka Maammulka Maaliyadda Dowliga ah ee Puntland (Puntland Public Finance Management).
Qodobkaa 1aad: Iskudheellitirnaan la’aanta qoondada kharashaadka miisaaniyadda iyo madaxyadeeda:
Qiyaasta kutalagalka dakhligasagaalka bilood [April—Dec) ee ka soo xarooda gudaha waa $54.45 million, qiyaasta kharashaadka joogtada ah ee sagaalkaas biloodna wuxuu ku jaango’an yahay cadadka dakhliga. Haddaba $48.98 millionka mid ah waxaa loo qoondeeyey kharashaadka mushaarka iyo gunnooyinka shaqaalaha, adeegyada iyo alaabta, iyo kharashaadka kale. Tan ayaa ka dhigan in 89.9% dakhiga laga soo xareeyo shacabka loo qoondeeyey inay u baxdo kharash ahaan, halka 11% ($5.56 million) loo qoondeeyey in dib loogu celiyo si loogu fuliyo adeegyada iyo barnaamijyada dowladda ay bulshada u qabato!. Dhanka kale, Wasaaradaha khuseeya ila dhaqaalaha sida Xannaanada Xoolaha, Beeraha, Ganacsiga, Kalluumeysiga, dalxiiska, Dekedaha iyo Garoomada wax qoondo ah kuma lahan qoondada bulshada lagu celinayo—qoondada 11% ee aan kor ku xusay. Islasidoo kale arrimaha bulshada sida Dhallinyarada, haweenka, dhaqanka iyo cyaaraha wax qoondo miisaaniyadeed ah kuma lahan dakhliga kasoo xarooda gudaha. Dhammaan fulinta siyaasadaha iyo adeegyada la xiriira qeybaha kor ku xusan waxaa laga sugaa oo ay ku tiirsanyihiin taageerada iyo mashaariicda hay’adaha.
Gunnooyinka kale ee baxsan gunnooyinka mushaaraadka iyo kuwa aan lacagta ahayn ee loo asteeyey Wasaaradda Maaliyadda iyo Madaxtooyada waa $653, 430(9-ka bilood), waana qoondo ka badan miisnaaiyadda kharashaadka joogtada ahee Wasaaradaha Caddaaladda iyo Xannaanada Xoolaha, Hantidhawrka iyo Garyaqaabnka Guud taas oo isku ah $575,000sagaalka bilood.
Kharashaadka miisaaniyadda ee u qoondaysan Taliska Ciidanka Daraawiishta waa $1.39 Million bishii, taas ka dhigaysa ha’adda labaad ee ugu badan qoondada kharashaadka marka laga yimaado Wasaaradda Maaliyadda. Iyadoo Taliska Ciidanka Daraawiishtu helaan qoondo sarraysa, haddana waxaa inta badan soo noqnoqta gadoodka ciidamada iyo cabashada la xiriirta xuquuqahooda. Tani waxay shaki iyo suaal galinaysaa halka ay ku baxdo kharashadka miisaaniyadeed ee Taliskaan.
Sida ku cad Xeerka Hantidhawrka Guud, Xeer Lam 15, 27/09/200, Xafiiska Hantidharka Guud (XHG), waa Hay’ad madaxbannaan oo u xilsaaran baaritaanka, la socodka iyo dabagalka dhammaan dhaqdhaqaaqa dakhliga, kharashaadka iyo mashaariicda dowladda iyo Hay’adaha caalamiga ah. Hantidhawrka Guud waxaa waajib ku ah inuu soo saaro warbixin sannadleh ah. Muddo 18 sano ah oo uu jiray XHG ee Puntland, shacab weynaha Puntland wali waayoaragnimo uma yeelan inay helaan oo ay soo gaarto warbixinno uu soo gudbiyey xafiiksu taas oo ku aaddan sida loo maareeyey deeqaha, mashaariicda iyo miisaaniyadda Dowladda. Marka aad waraysato khubarada dhaqaalaha iyo dadka xog-ogaalka ahwaxay xusayaan dibdhaca ugu weyn ee haysta XHG ay tahay tabaryari dhaqaale, oo uusan xafiisku helin miisaaniyad ku filan si uu ugu madaxbannaanaado hawlihiisa shaqo.
Inkastoo oddoroska miisaaniyaddu leedahay koror iyo isdhin, sidoo kale qna qiyaasta miisaaniyadda kutalagalka ah ee sannadlaha ay kordhi karto, haddana wali waxaan si rasmi ah u shaac bixin xisaabcelin rasmi ah, ayna maqantahay hufnaantii uu u shaqeyn lahaa Xafiiska Xisaabiyaha Guud.
Qore: Faarax Bashiir Cismaan